मेराे बुबा पंचबहादुर दुवालकाे भिमरथाराेहन
Posted by SK Duwal at 11:05 AM
यस लग्जरी मोटर होम देखे पछी....!
संसारमा कुनै पनि असंभव छैन.. तपाईको शंका तब बदलिन्छ जब यस चलता-फिर्ता पांच तारे कार लग्‍जरी मोटर होमको अगाडी हुनेछ.
हो, आकर्षक लुक बलियो इन्जिन क्षमताबाट सजिएको यस मोटर होम धेरै नै खास छ. यस अदभूत मोटर होम कारको निर्माण अस्ट्रियाको मार्ची मोबाईल्स कम्पनीले गरेको हो. यस मोटर भित्र प्रवेश पछी तपाईलाई अनुभूति हुनेछ कुनै फाइब स्टार होटलको लग्‍जरी रूमको हो. त्यति मात्र हैन भित्र राम्रो स्पेस को लागी यसमा फोल्‍डींग सिस्‍टमको प्रयोग पनि गरेको छ. आउनुस त्यस अदभूत मोटर होमको केहि चित्र हेरौं...
Posted by SK Duwal at 7:00 AM
अमेरिकामा नेपाली नटवरलाल 'नेपाली डार्क प्रिन्स'
Posted by SK Duwal at 7:50 AM
एक पल्ट बाईक हेरी आनन्द लिने हो कि?
Posted by SK Duwal at 9:21 AM
सुस्तरी-सुस्तरी कसैको आहत आउँदा
कि लाग्दथ्यो तिमी आएछ
उडिरहेको कुनै चिज जब मेरो शिरमा पड्दा
तिम्रै आंचल हो जस्तो लाग्छ
हावा जब कानमा सिन्न्न आवाज दिई बग्दा
तिम्रै आवाजको समरण मलाई दिलाउँछ
ढोकामा जब कसैले टक-टक आवाज गर्दा
मेरो नयनले तिम्रै आगमनको महसुस गराउँछ
सुनसान रात अनि अध्यारो आकाशमा हेर्दा
चहकिलो तारा बनी न्यानोपन दिई रहेको हुन्छ
Posted by SK Duwal at 10:53 PM
१५ हजारमा ५५ इञ्चको स्मार्ट टिभी : दराज अनलाइनसँगको मेरो अनुभव - मेरो कोठाको टिभीले काम गर्न छोडेको पनि धेरै नै भइसक्यो। हेर्ने त्यति फुर्सद पनि हुन्न। बेलुका एकछिन मात्र हेर्ने भएकाले धेरै भयो थन्किएको। फुटबलको महासंग...
धेरै भो तिम्रो बोली नसुनेको - *धे*रै भो तिम्रो बोली नसुनेको मनै खडेरी भो टाढा तिमी भए देखी मेरो साथ अधुरो भो तिम्रो स्मृतिको छट्पटीले रात कटाउन गाह्रो भो यादमा टोलाए बस्दा पनि दिन ...
केहि उपयोगी साइटहरु
नेपाली लेखक सोसाइटि
बिबिसी - नेपाली
गजल-कबिता अन्तिम पृष्ठ दायाँ बायाँ प्रबिधि घटना परिघटना देश भित्र देश-विदेश कला र शैली बिदेश अनुभव लघु कथा फोटो
अभिलेखालय July 26 (4) August2(2) August9(1) August 16 (2) August 23 (1) August 30 (3) September 13 (1) September 20 (1) September 27 (1) November 15 (1) April 11 (2) April 18 (2) April 25 (2) May 30 (1) June 27 (1) July 18 (1) July 25 (1) August 8 (3) August 15 (3) August 22 (3) August 29 (1) September5(2) September 12 (2) September 19 (1) October3(2) October 24 (1) December5(1) January9(1) August7(2) August 14 (2) August 21 (2) August 28 (1) September 25 (1) October 23 (1) December 18 (1) April 15 (1) April 29 (1) July 29 (1) September9(1) June9(1) July 23 (1)
राजमार्गमा यौन !
कवि बुद्धिसागर फिल्म हेर्न जय नेपाल हल पुगेछन् । फिल्म सुरु हुनुअघि टाइटानिकको संगीतमिश्रति धुन भएको कन्डमको विज्ञापन बजेछ । बुद्धिसँगै बस्...
सं सारमा कुनै पनि असंभव छैन.. तपाईको शंका तब बदलिन्छ जब यस चलता-फिर्ता पांच तारे कार लग्‍जरी मोटर होमको अगाडी हुनेछ. हो, आकर्षक लुक बलियो...
साँच्चै, नेवार समुदाय जनजाति हुन कि होइनन् ?
भबिश्य अहिले सम्म लेखेको छैन र कसलाई थाहा छ कि मौषम रोबोट ले खतरा गरिरहेको छैन। के सुनिश्चत गर्नकोलागि हो कि मानव, जिज्ञासा प्राणी भएको न...